Fondation sandals sy sandals: manome hery ny olona
Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Fondation sandals sy sandals: manome hery ny olona
Sandals Resorts International noforonina Sandals Foundation, ary manana an'io filozofia io: Hitanay fa rehefa mampiasa vola amin'ny olona iray izahay, dia manome hery ny tambajotran'olona iray manontolo - ny fianakaviany, ny namany, ny vondrom-piarahamonina ary ny firenena izay samy voatendry handray soa amin'ny anjara birikiny.
"Ny ampahany tsara indrindra amin'ny fandraisana anjara amin'ity asa ity dia ny fahafantarana fa amin'ny faran'ny andro, na eo aza ny asa mafy sy ny olana lehibe indraindray, dia manampy amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny olona izahay," hoy i Joseph Wright, Great Shape! Inc, Tale Mpanatanteraka.
Ny fanamby atrehin'i Karaiba dia samy hafa sy be pitsiny toy ireo olona voakasik'izy ireo. Ny vondrom-piarahamonina dia tsy maintsy miady amin'ny olana toy ny fahantrana, tsy fitoviana ary herisetra isan'andro. Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa akaiky amin'ireo masoivohon'ny governemanta, ireo mpitondra sivika ary ireo mpamatsy vola tsy miankina, Sandals dia manampy amin'ny famoronana vahaolana maharitra maharitra izay manome hery ireo tanora, vehivavy, mpandraharaha eo an-toerana ary ireo sahirana.
Fandaharana sy tetik'asa momba ny kapa
Ny sekolin'ny mpandraharaha orinasa (fiofanana momba ny fandraharahana)
"Omeo trondro ny lehilahy iray, dia hanome azy sakafo iray andro. Ampianaro hanjono ny lehilahy iray, dia homenao mandritra ny androm-piainany izy. ” Ny fiofanana momba ny fandraharahana dia natao hanomezana ny olona hampivelatra ny fahaiza-manao takiana mba hamantarana, hanombohana ary hikolokoloana ny orinasa mahomby, hiteraka fotoana ahafahan'ny mpiasa miasa ho an'ny tenany sy ho an'ny mpikambana hafa ao amin'ny fiarahamonin'izy ireo.
Fampiroboroboana ny tanora
Ny fandraisana anjaran'ny tanora tena izy dia mahasoa ny vondrom-piarahamonina, fikambanana ary firenena amin'ny ankapobeny. Ny fahaizana mandray anjara tsara amin'ny tanora atahorana dia zava-dehibe amin'ny fiantohana ny ho avy tsara ho an'ny firenena. Ny tanora dia mahazo tombony sy mahazo ny fahaiza-manao amin'ny fiainana ary ny fahafaha-mianatra amin'ny alàlan'ny fanatanjahan-tena, mozika, fanofanana fahaiza-manao ary fandaharana fitsabahana hafa.
Fanatsarana ny fitsaboana
Ireo zazakely mialoha ny fotoana nahaterahana tany Antigua dia manana fotoana mety hiadiana bebe kokoa aorian'ny fanomezana zaza 2 feno ivon-toerana momba ny zazakely avy amin'ny Sandals Foundation (mitentina 20,000 299 $ eo ho eo) ho an'ny Vondron-jaza ao amin'ny Ivon-toeram-pitsaboana Mount St. John. Ireo milina ireo dia manome fikarakarana lehibe ho an'ny zazakely mialoha ny fotoana ilana izany. Ankehitriny, zazakely XNUMX no nampiasa ireo singa ireo.
Ny iray amin'ireo lafiny manandanja indrindra amin'ny vondrom-piarahamonina matanjaka dia ny fahasalamana, ary, noho izany, ny Sandals Foundation dia niasa tamim-pahavitrihana teo akaikin'ny toeram-pitsaboana toa ny Mount St. John's mba hanampiana amin'ny fananganana ny fahafahan'izy ireo amin'ny alàlan'ny fanomezana fidirana amin'ny fiofanana, fanomezana fitaovana ilaina be, ary fanomezana teknolojia nohavaozina izay mampifandray ny hopitaly eo an-toerana amin'ny an'ny iraisam-pirenena.
Ireto milina Infant Care Center ireto dia manome fikarakarana be pitsiny, toy ny fifehezana ny mari-pana, ny fanaraha-maso ny vitaly, ny lanjany ary ny fanampiana amin'ny taovam-pisefoana an'ireo zazakely vao teraka rehefa heverina fa ilaina izany.
Fandaharana mozika an'i Flanker's
Ny Flanker Marching Band dia vondron'olom-bitsy tanora manantena be avy ao amin'ny tanàna anatiny - vondrom-piarahamonina Flanker any Montego Bay, Jamaika. Nandritra ny fitsangatsanganana Mega Fam, ireo mpiasan'ny dia dia niara-nivory mba hanome ho an'ny Flanker's Resource Center.
Ny famatsiam-bola ho an'ity programa ity dia nanolotra zava-maneno vaovao sy fanamboarana ireo fitaovana, lesona ary fitaovana ho an'ny teoria isan-kerinandro sy kilasy azo ampiharina, fanamiana ho an'ny mpikambana ao amin'ny tarika, mpandrindra ny tarika ary saram-panadinana ho an'ny laza adina ambaratonga. Ny tarika izao dia manao fampisehoana amin'ny sehatra iray izay nandoavana karama hilalao ao amin'ny faritry Sandals Montego Bay indray mandeha isan-kerinandro.
“Nandritra ny taona maro niainako ny mozika dia fantatro ny fikambanana manampy amin'ny ambaratongam-panampiana amin'ny fandaharan'asan'ny tarika, saingy ny Sandals Foundation dia nitondra ny kalitaon'ny fanampiana ho amin'ny ambaratonga hafa. Faly aho fa ny Sandals Foundation no voalohany nandia fotoana be indrindra hamelomana indray ny Flanker Marching Band Program, ”hoy i Mikel Turner, talen'ny tarika.
“Talohan'ny naha-tao amin'ny tarika ahy dia tsy dia fantatro ny fomba tokony hahatongavako ho anisan'ny ekipa sy ny fomba hinoako ny tenako sy ny fahaizako. Manome ahy zavatra andrasana sy fomba tsara hanehoana ny hevitro ny tarika », hoy ny mpikambana ao amin'ny tarika Renaldo Hendrick.
Ny Sandals Foundation dia nanao fanoloran-tena ho an'ny faritra Karaiba manontolo hamaly haingana ireo loza nasionaly vokatry ny loza voajanahary.
Ny lozisialy Foundation dia manohana ny vahinin'ireo mpitsangatsangana, mpiara-miasa, mpivarotra, mpamatsy ary fikambanana hafa hitondra fanampiana amin'ireo vondrom-piarahamonina iharan'ny loza. Ho fanampin'izany, ireo fikambanana eo an-toerana izay miasa eny an-kianja dia mirotsaka hiantohana ny ezaka maharitra.
Sandals Foundation dia manohy ny fiaraha-miasa amin'ny programa SickKids Foundation Caribbean, izay misy akony amin'ny nosy Bahamas, Barbados, Jamaica, St. Lucia, St. Vincent, ary ny Grenadines. Tanjona ny hanomezana fiofanana sy loharanom-pahalalana hahafahana mamantatra tsara kokoa sy hitsaboana ireo ankizy voan'ny homamiadana sy marary saina ra mahery vaika manerana an'i Karaiba.
Ny Sandals Foundation dia nanampy betsaka tamin'ny famatsiam-bola hetsika telo lehibe:
Fanofanana ho an'ny mpitsabo mpanampy
Mamorona efitrano fandefasana telefaona any St. Lucia mba hahafahan'ny manam-pahaizana manokana eo an-toerana manolotra tranga marary amin'ny SickKids mba hahazoana torohevitra, ary koa mampifandray ireo dokotera amin'ireo nosy manodidina.
Fampiofanana dokotera onkolojista zaza, Dr. Chantelle Browne, izay hiverina any amin'ny tanindrazany, Barbados, taorian'ny nahavitany fiarahana 2 taona tao amin'ny Hopitaly ho an'ny Sick Children any Toronto ary lasa oncologist faharoa momba ny zaza zaza any Karaiba Atsinanana.
"Ao anatin'ny Division of Hematology and Oncology at SickKids, dia hanana fotoana hijerena aho ary hiroboka amin'ny fitantanana fitsidihana marary 22,000 isan-taona any amin'ny Sears Cancer Clinic sy ireo zaza 350 eo ho eo izay vao voan'ny homamiadana isan-taona. any Toronto, ”hoy ny Dr. Chantelle Brown.
Vehivavy manampy ny hafa hahatratra (WHOA)
Ny Sandals Foundation sy The Bob Marley Foundation dia nanambatra ny hery hamahana ny olana mitohy momba ny tsy fitovian'ny lahy sy ny vavy any Karaiba. WHOA dia manome fanohanana, fampianarana, fanabeazana ary fanofanana fahaiza-manao hanomezana hery ny vehivavy voahilikilika manerana ny faritra.
Ny sekretera amerikanina DOT dia nangataka ny hitaky famerenam-bola amin'ny sidina noho ny fitsangatsanganana nataon'ny COVID-19
Manomboka mikaroka filoha vaovao sy tale jeneraly ny Hawaii Tourism Authority